Tirada isbitaalada la seexinayo ee labada xarumood ee caafimaad ee ugu waa weyn magaalada Sioux City | KWIT
Somali News 11.30.2020
Isbitaallada isbitaallada ayaa weli ku sii dhacaya qaybaha kale ee Iowa, laakiin qaar ka mid ah saraakiisha daryeelka caafimaadka ayaa muujinaya walaac ah inay mar kale soo kici karaan haddii isu imaatinnada Thanksgiving ay sababeen faafitaan fayras oo dheeri ah sidii la filayay.
Dhimashada Iowa coronavirus ayaa sii kordheysay labadii toddobaad ee la soo dhaafay iyadoo gobolku dhammaanayo Nofeembar oo ay u dhinteen 687.
Taasi waa kordhin 34% laga bilaabo Oktoobar.
Iowa waxay soo warisay 28 dhimasho oo dheeri ah maalintii Isniinta, taasoo wadarta guud ee gobolka ka dhigeysa in ka badan 2,400, iyadoo 130 lagu diley Gobolka Woodbury.
Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa soo warisay afar qof oo kale oo dhimatay muddo 24 saac gudahood ah, oo uu ku jiro nin da 'dhexaad ah.
Waxaa jiray 44 kiis oo cusub in kabadan 10,000 tan iyo bilowgii cudurka faafa.
Heerka waxtarka imtixaanka ee Degmada Dakota waa ku dhowaad 22%. Waaxda caafimaadka maxalliga ah ayaa sidoo kale diiwaangelisay 81 xaaladood oo cusub laga bilaabo Thanksgiving ilaa maanta oo loogu talagalay in ka badan 3,200 oo xaaladood ah dhammaantood iyo 50 dhimasho ah.
Gov. Pete Ricketts wuxuu kordhinayaa xayiraadaha Nebraska ee hadda loo yaqaan 'coronavirus' illaa iyo bisha Diseembar iyada oo tirada dadka deggen cisbitaalka la jiifay fayrasku ay ka hooseeyaan 900 markii ugu horreysay muddo ka badan laba toddobaad.
Xayiraadaha hadda jira waxay u baahan yihiin waji-gelinta meheradaha qaarkood, sida meelaha lagu qurxiyo iyo meelaha lagu qaawiyo, halkaas oo ay adag tahay in la ilaaliyo 6 fuudh oo masaafada u dhexeysa dadka ah.
Waxaa lagu waday inay dhacaan maanta. In kasta oo hoos u dhac ku yimid isbitaallada, isbitaalada ayaa weli ku adkaa gobolka oo dhan.
Ricketts waxay la kulantay cadaadis sii kordheysa si ay u soo rogto amar maaskara ah oo gobolka oo dhan ah laakiin wuu diiday inuu sameeyo, isagoo ku doodaya in amarada ciilku ay tahay oo ay la kulmi karto iska caabin.